Tigraay: Ministira Haajaa Alaa duraanii, Obbo Siyyum Masfin eenyu? - BBC News Afaan Oromoo
Tigraay: Ministira Haajaa Alaa duraanii, Obbo Siyyum Masfin eenyu?
Mootummaan Itoohpiyaa, Ministira Haajaa Alaa duraanii kan turan Obbo Siyyum Masfin dabalatee aanga'oota ol-aanoo TPLF afur ajjeefamuusaanii kaleessa (Amajji 13, 2021) beeksiseera.
Obboo Siyyuma aanga'oota TPLF to'annaa jala akka oolfamamaniif mootummaan Federaalaa ajaja irratti baaasee keessaa tokko turan.
Obbo Siyyum Masfiim waggoota 20 oliif aangaawaa olaanoo TPLF ta'uun Itooophiyaatti Ministira Haajaa Alaafi Chaayinaatti Ambaasadara Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'an, bara qabsoo hidhannoo TPLF irraa eegalees nama dhiibaa olaanaa qabaataa turan ta'utuu himama.
Siyyum Masfin (Ambaayee) eenyu?
Qabsaa'aa Siyyum Masfin jalqaba bara 1940 keessa ganda Konyaa Aggaamee keessatti argamtu Azebaa jedhamtu keessatti maatii sadarkaan jireenyaa olaanaa ('Massaafintootaa') irraa nama dhalatedha.
Barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Addigiraat mana barumsaa Agaaziitti barachuun, Kolleejjii Polii Tekinikii Baahirdaarirraa ammoo dippiloomaan eebbifameera.
Barnoota digirrii barachuuf Yunvarsiitii Finfinnee kan gale Obbo Siyyum, Yunvarsiiticha keessatti warra Waldaa Barattoota Tigiraay hundeessan keessaa tokko ture.
ALI Waldichi gara Paartii Saba Tigiraay kan dhoksaan hundeeffameetti ol guddate. Siyyum namoota paarticha hundeessan torba keessaa tokko ta'e.
Eenyummaa anga'oota TPLF tibbana to'annoo jala oolfamanii gabaabbinaan
Erga sirni Hayilasillaasee kufeen booda dargaggoonni hedduun paartilee siyaasaa hundeessuun qabsaa'aa turan. Miseensonni Paartii Saba Tigiraayis, "Gaaffileen saba Tigiraay qabsoo hidhannootiin hiikamu" waan jedhaniif qabsoo hidhannoo gaggeessuuf gammoojjii Tigiraayitti galan.
Obbo Siyyum isaan keessaa tokko ture.
Siyyum qabsoo hidhannoo keessatti
Sosochiin Uummata Wayyaanee ifatti akka jalqabu erga murtaa'ee gaggeessummaan addicha karaa garaagaraa sadii akka gaggeeffamu murtaa'e.
Gareen tokko gara gammoojjii Deddebititti deemuun qabsoo hidhannoo akka gaggeessu, gareen biraan ammoo gare Eertiraa deemuun muuxannoo qabsoo hidhannoo akka qooddatu.
Garee sadaffaan ammoo magaalaatti qabsoo magaala keessaa akka gaggeessu murtaa'e.
Obbo Siyyum namoota 11 gara gammoojjiitti deemuun qabsoo hidhannoo jalqaban keessaa tokkodha.
Amabaayee Siyyum maqaa maatiin isaa moggaasaniif ture. Gara qabsooo hidhannootti erga deemanii booda hundumti isaanii maqaa isaanii jijjiiruun dirqama waan taheef jaalleewwan isaa keessaa tokko maqaa ''Siyyum'' jedhu moggaaseef.
Gara walakkaa bara 1970 keessa namoota dhaabicha gaggeessuuf filataman keessaa tokko kan ture Siyyum, Adiyyobboo bakka jedhamutti lola Dargii waliin gaggeeffamerratt mataan isaa dhahamuun yaaliif gara Eertiraatti ergamee akka ture kitaaba Tsinat jettu irratt seenaa isaa himtu irratti barreeffameera.
Qabsaa'aa Mahaarii Takilee [Musee] qabsaa'ota gammeeyyii TPLF fi Ertiraatti makaman keessaa tokko ture. Innis Shiree Indesillaaseetti Dargiidhaan qabamee hidhamee waan tureef Siyyum ''Oppireeshinii Musee'' isaan gadhiisisuuf hojjetame qorachuuf maraatuu fakkaatee akka hojjetaa ture seenaan isaa ni hima.
Museen oppireeshinichaan mana hidhaatii baheera.
Siyyum Sudaanitti ergamaa addaa ta'uun
Siyyum bara 1969 itti-gaafatamaa dhimma alaa TPLF tahuun Sudaanitti ergamee waggoota 15'f tajaajileera.
Tibbaa Kaartum tureetti maqaansaa gara Muuseetti geedaramee akka ture himama.
Siyyum bara 1991ttis marii Dargii waliin Landanitti taasifamee irratti Mallas Zeenaawiifi Birhaanee Gabrakiristoos waliin erga hirmaataniin booda gara Kaartuum imalan.
Isaan boodas, TPLF Finfinnee to'achuu waan danda'eef, injifannicha kabajuuf helikoptara pirezidaantiin Sudaan yeroo sanaa Umar Al-Bashir kennaniifiin gara Finfinneetti wayita balali'anitti samii irratti rakkoon teekniikaa mudatee akka ture himama.
Sababii kanaanis erga helikoptaritiin kufuu akka dandeessu balaliisaatti erga himameen booda, qabsoon waggooat 17 hoogganaa dura injifannoon xumuramee argu dhabusaanitti naasuu olaanaan isaan mudatee akka ture dubbatama.
Akka carraa ta'e garuu helikoptarittiin nagumaa magaalaa Finfinnee geessee qubachuu dandeessee.
Erga Sirni Dargii kufeen booda waggoota 20f Ministira Haajaa Alaa ta'un mootummaa MM duraanii Mallas Zeenaawii gaggeessaa ture keessatti tajaajilaniiru.
ALI bara 1993tti wayita aanga'oota TPLF jidduutti qoodinsi umameetti, Obbo Siyuum garee Mallas Zeenaawii waliin warra hiriiran keessaa turan.
Walitti bu'iinsa daangaa Itiyoo-Eritaatiin walqabatees, erga manni murtii Baadimeen Eritraaf akka ta'u murteesseen booda, akka waan Itoophiyaaf murtaa'eetti ibsa kennuun magaalaa Finfinneetti hiriirri deegarsaa guddaan akka bahamu taasisuun qeeqamu turan.
Gama biraatiin ammoo, Itoophiyaan biyyoota ollaa garaa garaa waliin wilitti dhufeenya gaarii akka qabaattuuf akka taasisan dubbatama.
Gama Ertiraatiin garuu wal dhabdeen daangaa osoo hin hiikamiin akka turu taasisuun dhimmicha karaa nagaatiin akka furamuuf yaaliin taasisan akka hin ture himatamu turan.
Kana malees, tibba TPLF dhaaba ADWUI keessatti olaantummaa argachuun sarbamni mirgoota namoomaa biyyattii keessatti raawwatameetti aangoowwaan itti-gaafatamoo ta'an keessa akka jiran himama.
Kanaan alatti, abbootiin qabeenyaa Eshiyaa Itoophiyaa keessatti invastimantii akka taasisaniif yaalii olaanaa taasisuun galateefamu. Isan boodas Obbo Siyyum waggoota jahaaf biyya Chaayinaatti Ambaasaadara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru.
Siyyum jijjirama bara 2018 booda
Erga MM Abiy gara aangootti dhufeen booda Obbo Siyyuma Ministeera Haajaa Alaa keessa tajaajiluu eegalanii turan. Booda garuu gammadoo waan hin taaneef gara Maqale deemutu himama.
Tibba waldhabdeen MM Abiyiifi TPLF jidduutti cimaa dhufeetti, Obbo Siyyum mootummaa naannoo Tigraay keessattis ta'e TPLF keessatti gahee kamuu qabaachuu baatulleen, kanneen midiyaadhaan bulchiinsa Abiy qeeqan keessa tokko turan.
Gaaffiifi deebii midiyaalee adda addaa waliin taasisaniinis, 'Abiy Ahimadiifi Pirezidaanti Isaayaas nageenyaafi tasgabbii Tigraayiifi Itoophiyaa jeeqaa jiru' ejjannoo jedhu calaqisiisaa turan.
Osoo raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee to'annoo jala hin oolchiin dura aanga'oonni TPLF magaalaa bahuun gara gammoojiitti akka imalan himama.
Lola baatiiwwan lamaaf naannoo Tigraayiitti gaggeeffameen, Obbo Siyyum dabalatee aanga'oonni TPLF hedduun mootummaa Federaalaatiif harka akka kennatan waamichi taasifameef ture. Haaluma kanaanis qondaaltoonniifi aanga'oonni TPLF harka kennuu didan ajjeefamuu ibsa Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaatiin kennameen himameera.
Haata'u malee, aanga'oota ajjeefamanis ta'ee kanneen to'annoo jala oolfaman jedhan ilaalchisee gama TPLFn hanga yoonaatti kan jedhame hin jiru.
Ka'umsi maal ture?
Lolli Naannoo Tigraay Sadaasa 04 bara 2020 haleellaa humnoonni TPLF Raayaa Ittisa Biyyaa ajaja Izzii Kaabaa irratti raawwatan hordofuun ture kan eegale.
MM Abiy Ahimad 'seera kabachiisuuf' jechuun Raayyaan Ittisaa biyyaa humnootii TPLF irratti tarkaanfii akka fudhatu ifatti ajaja erga kennaniin booda ture gara lolaatti kan seename.
Lola kanaan boodas aanga'oonni TPLFfi dureewwan humna waraana naannichaa haleellaa buufata Izzii kaabaa irratti raawwatamee keessaa harka qabu jedhaman, akka to'atamaniif Komishinii Poolisii Federaalaafi Abbaa Alanagaa federaalaatiin ajajni irratti bahnsaa ni yaadatama.
Kana hordofees aanga'oonni TPLF muraasni to'atamanii kaan ammoo ajjaafamuu motummaan biyyatti yeroo garaa garaatti beeksisaa jira. Haata'u malee dhimma kana ilaalchisee gama TPLF fi madda walabaa irraa wanti jedheme omtu hinjiru.
Kana malees erga lolli kun eegalee kaasees namoonni dhibba hedduun lakkaa'aman ajeefamuufi kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman bakka jireenyaasanii buqa'aniiru. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa 56,000 caalan daangaa qaxaamuruun gara Sudaan baqataniiru jedha odeeeffannoon UNHCR irraa argame.
Lola Tigray: Abbaay Tsahaayyeefi Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF afur ajjeefaman
UStti qondaaltoonni intala waggaa 8tti dhukaasuun ajjeesan himataman